Mpanamboatra flange tsara indrindra ary orinasa | Puyang
Fampidirana: Atsofohy amin'ny flange, antsoina koa hoe flange SO. Izy io dia karazana flange slide amin'ny fantsona misy endrika anatiny izay lehibe kokoa noho ny fantsona. Satria ny savaivony anatiny amin'ny flange dia somary lehibe kokoa noho ny savaivony ivelany amin'ny fantsona, ny flange SO dia azo ampifandraisina mivantana amin'ny fitaovana na fantsona amin'ny alàlan'ny fantsom-bokatra eo an-tampon'ny sy any ambanin'ny flange. Izy io dia ampiasaina mba hampidirana ny fantsona amin'ny lavaka anatiny ao anaty flange.
Ny flange SO dia azo zaraina ho flange lovia fantsona SO ary flange fantsom-pohy vy toy ny valizy. Ny toetrany mekanika dia eo anelanelan'ny flange integral sy ny flange looping. Tsotra ny rafitra ary mora ny fanodinana. Noho izany ny slip amin'ny flange welding dia be mpampiasa amin'ny pipeline tsiranoka isan-karazany.
Miankina amin'ny tarehy samy hafa, misy koa ireo tandavan-tarehy miakatra sy karazan-tarehy miendrika peratra.
Tombony azo amin'ny slip flange
Ny vidin'ny fametrahana ambany
Mora kokoa ny mifanaraka amin'ny faritra hafa mandritra ny fametrahana
Porofo mivaingana kokoa
Lasitra anaty sy ivelany amin'ny flange
Maka fotoana kely kokoa hanapaka marina ny fantsona
Rehefa mikorisa amin'ny flange ny fantsona dia mifanaraka amin'ny hub ambany amin'ny slip on flange
Hita tamin'ny 2006
18000 metatra toradroa
Famaranana vokatra vita, vokatra ho an'ny fandefasana, akora, fananganana orinasa,
Manome ireo vokatra mahasoa, mamporisika tsara fanompoana
Masinina injeniera, milina fitrandrahana harena ankibon'ny tany, fitaovana fampitaovana herinaratra, milina fiarovana ny tontolo iainana
Teo aloha: Plate Flange
Manaraka: Socket weleing Flange